China Forged5Spoke Alloy Wheels ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Hanvos
5 Spoke Alloy Wheels အတုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘီးများသည် ဈေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ သေးငယ်သောတိကျသောဆွဲငင်အားနှင့် ကောင်းမွန်သော corrosion resistance-tance တို့ရှိသည်။အရည်အသွေးကို အရင်းအမြစ်မှ မြှင့်တင်ထားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် အစောင့်အကြပ်ထားရှိခြင်း။
၎င်းသည် ခိုင်ခံ့သော ဆုပ်ကိုင်မှု ရှိပြီး ကွေ့သည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်၏ ယိုင်လဲမှုကို လျှော့ချပေးကာ ချော်လဲခြင်းနှင့် ပျံ့လွင့်မှုကို လျှော့ချပေးကာ လည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်သော ဘရိတ်အုပ်ခြင်း နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်တို့ ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘီးများသည် သံချေးတက်ခြင်း၊ တောက်ပြောင်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ကား၏အလုံးစုံအသွင်အပြင်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ဘီးများကို အထူးပြု ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါသည်။အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်အား အကောင်းဆုံးဘီးများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
လိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံများဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို အချိန်မီပေးပို့ရန် အသင့်ရှိပါသည်။
ဖောက်သည်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
1. နမူနာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်၊ အော်ဒါမတင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန် ကြိုဆိုလျက်ရှိပြီး စပေါ်ငွေပေးဆောင်ပါက သင်သည် အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
2. ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများယူနိုင်သည့်အတိုင်းအတာကို ပံ့ပိုးပေးသည်- သုံးစွဲသူများသည် ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးရန် တတိယအဖွဲ့အစည်းအတွက် စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးသည် စံချိန်စံညွှန်းအောက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော နမူနာများနှင့် ကွဲလွဲပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်မီ မပို့ဆောင်ပါက သင့်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးပါမည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် customer-oriented ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဖောက်သည်တိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မှ ပေးဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်မရွေး ခံစားနိုင်သည်။
5. ပဏာမဒီဇိုင်းတွင်၊ ၎င်းတို့ကို စံနှုန်းအတိုင်းဖြစ်စေရန် နမူနာများပေါ်တွင် အ radial နှင့် bending tests များကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။
ယခင်- Forged Alloy Wheel Rim
နောက်တစ်ခု: Porsche HQ2290 အတွက် အလူမီနီယမ် ဘီးအတုများ
စိတ်ကြိုက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အလူမီနီယမ် အလွိုင်း အတုပြုလုပ်ထားသော...
18-24 လက်မ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီး...
အလူမီနီယမ် အလွိုင်းကား အနားသတ် စိတ်ကြိုက်ဘီး